Amantii Skip to Main Content
Amantii	Aadaa fi amantii uummata Oromoo walitti hidhamee jira. Kunis baayyee bal’aa fi gadi fageenya kan qabu. Amantaan kan ittiin uummanni tokko uumaa fi uumama hubatu, akkasumas jireenya ilaalu, abdii dhugeeffatee ittiin jiraatu. Ummaanni Oromoo yeroo ammaa amantii gurguddaa sadi hordofa. Isaanis Waaqeffannaa, Kiristaanummaa fi Islaamummaa. Haa ta’u malee Oromummaan qorqalbii fi ilaalchi inni addunyaa kanaaf qabu tokkuma. Amantiifi falasamni Oromoo maddi isaa amantii fi falasamuma Kuush duriiti. Amantii Kuush ta’uun kan beekaman amantii “Osiriis” jedhamuu fi Waaqa tokkotti amanuu /Waaqa tokkicha Waaqeffachuu (Monotheism) ture.
Amantiin Oromos kan amantii Kuush durii Osiris jedhamuun wal-fakkaata. Oromoon Waaqa gurraacha tokkichatti amana. Akka namni C.H. Vayil barreessetti “Waaqaa” is the creator of all things. He has a power to do and undo every thing. Oromoonis Waaqni uumaa waan hundaa ta’ee waan fedhe gochuu fi gochuu dhiisuu kan danda’uudha jedhee amana. Aadaan amantaa Waaqeffanaa fi falasama uumaa fi uumama Oromoo keessatti gurraachummaan humna humnaa oliiti, qulqullummaadha, Waaqummaadha jedhanii amanu. Kanaaf Oromoon bifti Waaqaa akkuma Kuushummaa fi Afrikummaa gurracha jedhee dhugeeffata.
Gama aadaatinis uummanni Oromoo aadaa bal’aa fi boonsaa qaba. Aadaa uffannaa, aadaa qabeenyaa uumamaa, aadaa fuudha fi heerumaa, aadaa hariiroo hawaasumaa, aadaa walii fi uummata naannoo isaa jiraatu kabajuu, aadaa nyaataa fi dhugaatii, aadaa mirga dhala namaa eeguu, aadaa safuu Waaqaa tiksuu kkf qaba. Aadaa fi amantiin Oromoo walitti hidhamaa fi tokkumaa Oromoo kan tiksu ta’ee bu’uraaye.Tokkumaan ummaticha akka jabaatu fi eegamu keessa inni guddaan walitti hidhu aadaa fi amantaa isaati. Oromoon safuu fi duudhaa qaba. Safuun Waan heduu of keessaa qaba. Safuu eeguun seera. Seerri hundi safuu miti. Seerri ni tumama. Safuun garuu hin tumamu. Hin bahus hin bu’us. Safuun seera uumamaati. Safuu eegun dirqama jireenyati.